रक्सी पारेर बेच्नेहरु बाख्रापालनमा
पाल्पा – सिलुवा ४ गेझाबारीका विनबहादुर चिदी रक्सी पारेर बेच्ने पेशा छोडेर बाख्रापालनमा आकर्षित हुनु भएको छ ।
आफै सम्हालिनसमेत नसक्ने गरी रक्सी खाने चिदीले अहिले ६०\_७० वटा बाख्रा पालेर आयआर्जन गरेको देख्दा स्थानीय किसानहरु छक्क परेका छन् । घरमै रक्सी पार्ने, रामपुरमा बेच्न लैजाने र खाँदै फर्कने चिदीको दिनचर्या फेरिएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले हेफर इन्टरनेशनलको सहयोगमा सिलुवमा साना किसान उद्यमी सवलीकरण परियोजना सञ्चालन गरेपछि विनबहादुर चिदीको जीवनशैली फेरिन पुगेको हो । रक्सीमा बेहोसिएर जीवन बिताएका चिदीले अहिले आधुनिक खोरमा नश्ल सुधार गरी उन्नत जातका बाख्रा पाल्नुभएको छ । बाख्राको जुतोले तरकारी खेती पनि फस्टाएको छ ।
रामपुर नगरपालिकामा खपत हुने रक्सीको ठूलो परिमाण अझै पनि सिलुवाले निर्यात गर्दै आएको छ । लुकीछिपीको रक्सी व्यापार सोचे जति सजिलो छैन । विगत सम्झदै विनबहादुर चिदीले भन्नुभयो, ‘पटकपटक प्रहरीले समात्यो । घरेलु मदिरा नष्ट गर्ने अभियान भन्दै श्रमको मूल्य पोखिदियो । अनेकन् दुःख दियो ।’ रक्सीको व्यापार समस्या बनेका बेला रेडक्रस समाधान लिएर गाउँमा आएको उहाँको बुझाई छ । रेडक्रस पाल्पा शाखाका कार्यक्रम निर्देशक बाबुराम कार्कीले यहाँका किसानलाई कृषि र पशुपालनमार्फत आत्मनिर्भर बनाउन र सभ्यतातर्फको बाटोमा हिंडाउन परियोजनाका सम्पूर्ण जनशक्तिलाई भनिएको बताउनुभयो । कार्कीले भन्नुभयो, ‘मानिसले गरिआएको पेशा र देखिआएको संस्कृति परिवर्तन गर्न सजिलो छैन । यद्यपी रक्सी पारेर जीवन चलाउनेलाई अर्को व्यवसायमा लैजान पहल गरेका छौँ ।’
सिलुवा माझकोट कैनीपानीका सुकनारायण भारतीले तरकारी खेती, कुखुरापालन र घाँस खेतीबाट वार्षिक साढे ७ लाख रुपैँया कमाई गर्दै आउनुभएको छ । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा २ वर्ष दुवई बसेर फर्कनुभएका भारतीले गोलभेंडा र खुर्सानी खेती, लोकल र ब्रोइलर कुखुरा र आधुनिक घाँस बिक्री गरेर साढे ७ लाख रुपैँया कमाई गर्न सफल हुनुभएको हो । रक्सीबाट हुने कमाई अन्य पेशाबाट हुन्छ भने धेरैले रक्सी बेच्न छोड्ने भारतीको विश्वास छ ।
सिलुवा ४ बजरथोकका सोमप्रसाद श्रेष्ठ र सुमित्रा श्रेष्ठको दम्पतिले पनि ५० वटा बाख्रा अट्ने ५ कोठे आधुनिक खोर निर्माण गरी बाख्रापालन गर्न थाल्नुभएको छ । करिव १० वर्ष वैदेशिक रोजगारमा जानुभएका श्रेष्ठले व्यवस्थित बाख्रापालन सुरु गरेकै वर्ष ३३ हजारको खसी बिक्री गर्नुभएको छ । विदेशमा नोकरी गर्दा नोकरको व्यवहार सहेका श्रेष्ठलाई आफै मालिक आफै नोकर बनेर गाउँमै काम गर्दा आनन्दको महशुस हुने गरेको छ ।
निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई व्यवसायमुखी र निर्यातमुखी बनाउन सिलुवाका केही अगुवाहरु लागि परेका छन् । परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक दिनेश घिमिरेले हेफरको आधारशीला, पशुपालन, गोठसुधारलगायतका तालिमपछि स्थानीय कृषकहरुमा उद्यमशीलताको भावना बढेको जानकारी दिनुभयो । घिमिरेका अनुसार सिलुवामा अहिले १७ जनाले १० वटा भन्दा बढी माउ बाख्रा पाल्ने योजनाका साथ अघि बढेका छन् । यसैगरी ७६ जनाले ६ वटाभन्दा बढी माउ बाख्रा पाल्ने गरी खोर निर्माण तथा सुधार गरेका छन् ।
परियोजना आरम्भ हुनुभन्दा अघिसम्म सिलुवामा २ हजार ८ सय ६० वटा बाख्रा रहेका थिए । उपहार ४ सय ६० र नश्ल सुधारका लागि ४२ वटा बोका प्रदान गरेपछि सिलुवामा हाल ४ हजार ४ सय ८२ वटा बाख्रा पुगेका छन् । स्थानीय समुदायले हेफरलाई गोठ निर्माण, खोर सुधारलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा अनुदान, उद्यमी फलोअप कार्यक्रम थप्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बाख्रापालनका अतिरिक्त व्यक्तिको रुची र आवश्यकता आधारमा आयआर्जनका कार्यक्रममा टेवा हुनुपर्ने अगुवा किसानहरुको सुझाव छ । तालिमलाई मितव्ययी बजेट राखेर पनि किसान सहयोग थप्नुपर्ने मूल समूहका अगुवाहरुको भनाई छ । जनमार्ग उच्च माध्यमिक विद्यालयका प्राचार्य श्याम दिश्वाले हेफरले तालिम र शिक्षामा जति जोडबल गर्छ, त्यति नै गुणस्तरीय जीवन सुधारका लागि पूर्वाधार सहयोगमा गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
तरकारी खेती, कुखुरापालन र घाँस खेतीबाट वार्षिक साढे ७ लाख रुपैँया कमाई
पाल्पा, भाद्र १२– सिलुवा माझकोट कैनीपानीका सुकनारायण भारतीले तरकारी खेती, कुखुरापालन र घाँस खेतीबाट वार्षिक साढे ७ लाख रुपैँया कमाई गर्दै आउनुभएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा २ वर्ष दुवई बसेर फर्कनुभएका भारतीले गोलभेंडा र खुर्सानी खेती, लोकल र ब्रोइलर कुखुरा र आधुनिक घाँस बिक्री गरेर साढे ७ लाख रुपैँया कमाई गर्न सफल हुनुभएको हो । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले हेफर इन्टरनेशनलको सहयोगमा सिलुवमा साना किसान सवलीकरण परियोजना सञ्चालन गरेपछि सुकनारायण भारतीको जीवनमा परिर्वतन आउन थालेको छ ।
सिलुवा ४ गेझाबारीका विनबहादुर चिदी रक्सी पारेर बेच्ने पेशा छोडेर बाख्रापालनमा होमिनुभएको छ । बजारमा बेच्ने मात्र नभई सम्हालिनसमेत नसक्ने गरी रक्सी खाने चिदीले ६०÷७० वटा बाख्रा पालेर आयआर्जन गरेको देख्दा स्थानीय किसानहरु छक्क परेका छन् ।
सिलुवा ४ बजरथोकका सोमप्रसाद श्रेष्ठ र सुमित्रा श्रेष्ठको दम्पतिले पनि ५० वटा बाख्रा अट्ने ५ कोठे आधुनिक खोर निर्माण गरी बाख्रापालन गर्न थाल्नुभएको छ । करिव १० वर्ष वैदेशिक रोजगारमा जानुभएका श्रेष्ठले व्यवस्थित बाख्रापालन सुरु गरेकै वर्ष ३३ हजारको खसी बिक्री गर्नुभएको छ ।
परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक दिनेश घिमिरेले हेफरको आधारशीला, पशुपालन, गोठसुधारलगायतका तालिमपछि स्थानीय कृषकहरुमा उद्यमशीलताको भावना बढेको जानकारी दिनुभयो । घिमिरेका अनुसार सिलुवामा अहिले १७ जनाले १० वटा भन्दा बढी माउ बाख्रा पाल्ने योजनाका साथ अघि बढेका छन् । यसैगरी ७६ जनाले ६ वटाभन्दा बढी माउ बाख्रा पाल्ने गरी खोर निर्माण तथा सुधार गरेका छन् ।
परियोजना आरम्भ हुनुभन्दा अघिसम्म सिलुवामा २ हजार ८ सय ६० वटा बाख्रा रहेका थिए । उपहार ४ सय ६० र नश्ल सुधारका लागि ४२ वटा बोका प्रदान गरेपछि सिलुवामा हाल ४ हजार ४ सय ८२ वटा बाख्रा पुगेका छन् । स्थानीय समुदायले हेफरलाई गोठ निर्माण, खोर सुधारलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा अनुदान, उद्यमी फलोअप कार्यक्रम थप्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
व्यक्तिको रुची र आवश्यकता आधारमा आयआर्जनका कार्यक्रममा टेवा हुनुपर्ने अगुवा किसानहरुको सुझाव छ ।
पाल्पाली समाज युएईद्वारा अक्षयकोष स्थापना
पाल्पा, भाद्र ७ -बैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा खाडी मुलुक युएईमा रहेका पाल्पालीहरु गोलबन्द भइ युएईमा गठन भएकोपाल्पाली समाज युएइले शिक्षा क्षेत्रअन्तर्गत गरिब एवं जेहन्दार विधार्थीलाई सहयोग तथा सम्मान गर्ने उदेश्यले प्रत्येक गाउँका विधालयमा अक्षय कोष स्थापना गर्ने भएको छ ।
पाल्पाली समाज युएईको बार्षिक कार्ययोजना अनुरुप पाल्पा जिल्लामा रहेका सबै गा.बि.स. काएक बिधालय छनोट गर्दै बिधालयमा रु २५हजारको अक्षय कोष स्थापना गर्न लागिएको छ । पहिलो चरणको कार्यक्रमाअकला नि.मा.बि सिलुवा २ तामाखानीमा २५ हजार रुपैँया हस्तान्तरण गरिएको छ । कार्यक्रममासमाजका ओम कुमारी खाँण, विद्यालयका धनवीर हिस्की,प्रधानअध्यापक राजेन्द्र प्रसाद ढकाल, व्यवस्थापन समितिका नोक बहादुर जर्घा,हुमनाथ पङ्गेनी,वेस नेपाल सहजकर्ता भुपाल आले मगरलगायत समाजसेविहरुको सहभागिताथियो ।
मानबिय विकासको महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा रहेको शिक्षा क्षेत्रमा समय सापेक्ष सुधार गर्न जरुरी देखिन्छ।सभ्य, उन्नत, गतिशील, चेतनशील र सिर्जनशील समाजको निर्मार्ण गर्ने एवं देशलाई बिज्ञान र प्रविधिको बाटोमा अगाडी बढाउन साथै समृद्ध देश निर्माणको लागिशिक्षा नै पहिलो ढोका हो भन्ने नाराका साथ पाल्पाली समाज युएईले यस कार्यक्रम सुरुवात गरेको छ |
फेरिदो मौसमा स्वास्थ्यको ख्याल गर
पाल्पा, भाद्र ५– मौसम परिवर्तनका कारण पाल्पाका ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा भाइरल ज्वरोको प्रकोप बढेको छ ।
भाइरलले उच्च ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, टाउको दुख्ने र टाइडफाइडबाट सङ्क्रमित बिरामीको चाप अत्याधिक रहेको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । मौसममा आएको परिवर्तनसँगै ज्वरो, रुघाखोकी, झाडापखाला, टाउको दुख्ने, स्वासप्रश्वारमा समस्या देखिने र टाइफाइड हुने जस्ता बिरामीको सङ्ख्या बढेको जिल्ला अस्पताल पाल्पाले जनाएको छ ।
ज्वरो अत्याधिक बढ्ने, खान मन नलाग्ने, स्वासप्रश्वासमा समस्या आउने, टाउको दुख्ने, खोकी लाग्ने कमजोर भएको महशुस हुने जस्ता समस्या बिरामीमा देखिएको पाल्पा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डन्ट डा. भास्कर हुँमागाईले बताउनुभयो ।
सन्चो क्लिनिका संचालक डा झपेन्द्र ढकालले पछिल्लो समयमा भाइरलका बिरामीको सङ्ख्या अत्याधिक बढेको बताउदै भाइरल ज्वरोका बिरामीमा केही नयाँ लक्षण समेत देखिएको जानकारी दिनुभयो । ज्वरोको अवस्था पनि नयाँ खालको रहेको जानकारी दिदैँ डा ढकालले १०६ डिग्रीसम्म ज्वरो बिरामीबाट मापन गरिएको बताउनुभयो । विगतका वर्षमा भन्दा केही लक्षण फरक देखिएको भाइरल ज्वरोबाट बृद्ध, बालबालिका, महिला तथा ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा प्रभावित बनेको चिकित्सकको भनाइ छ ।
ग्रामीण क्षेत्रका स्कुले बालबालिका समेत भाइरलको सङ्क्रमणबाट प्रभावित भएका छन् । दुई हप्ता यता भाइरल ज्वरोको प्रकोप बढेपछि ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको सङ्ख्या न्युन बन्दै गएको छ । अहिले भाइरल ज्वरोबाट प्रभाविक हुने अत्याधिक भएको कसेनी स्वास्थ्य चौकीका सिनियर अहेब गोविन्दप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँले एउटै घरमा सबैजसोलाई भाइरल ज्वरोबाट थलिएको अवस्था देखिएको समेत बताउनुभयो ।
भाइरल ज्वरोजस्तै लक्षण देखिने तेल्घा–१, कृष्ण पौडेललाई धेरै पटकको चेकजाँचपछि स्क्रब टाइफस रोग लागेको पुष्टि भएको छ । पाल्पा, बुटवल र काठमाडौँमा गरिएको पटकपटकको चेकजाँचले आफूलाई स्क्रब टाइफस रोग लागेको भन्ने थाहा भएको र अहिले औषधि सेवन गरिरहेको पौडेलले बताउनुभयो ।
ग्यासको उचित मूल्य कायम गर
पाल्पा, भाद्र ३ – ग्यास कम्पनी र व्यापारीका कारण पाल्पाका उपभोक्ताहरू खाना पकाउने ग्यासको बढी मुल्य तिर्न बाध्य भएका छन् ।
ग्यास बिक्रेता स्थानीय व्यवसायीको मनपरीले प्रति सिलिण्डर तोकिएको मुल्य भन्दा एक सय रुपैँया बढी तिरेर ग्यास किन्न बाध्य भएको उपभोक्ताहरुको गुनासो गरेका छन् । सदरमुकाम तानसेनलगायत जिल्लाभर नै ग्यास बिक्रेता व्यापारीहरूले ग्यास कम्पनीबाट ढुवानी खर्च नपाएको भन्दै सरकारले तोकेको मुल्यभन्दा बढी रकम उपभोक्ताबाट असुल गर्दै आएका छन् ।
दैनिक तीन सय भन्दा बढी ग्यास सिलिण्डर खपत हुने गरेको छ । दैनिक तीन सय भन्दा बढी ग्यास सिलिण्डर खपत हुने गरेको छ । प्रशासनले अनुगमन प्रभावकारी बनाउन नसक्दा ग्यास व्यापारीले दैनिक ३० हजार रुपैँया ग्राहकबाट असुल्ने गरेका छन् ।
सरकारले खाना पकाउने एक सिलिण्डर ग्यासको मुल्य एक हजार तीन सय ७५ रूपियाँ तोकेको छ तर उपभोक्ताले एक हजार चार ७५ रूपियाँसम्ममा ग्यास खरिद गर्न बाध्य भएको उपभोक्ता कमल अधिकारीले बताउनुभयो । ‘व्यापारीहरूले जथाभावी ग्यासको मुल्य लिन्छन् बजार अनुगमन गरेर पनि केही भएको छैन ।’ ग्यासको चर्को मुल्य लिदासमेत प्रशासनको ध्यान नगएकोमा ग्यास उपभोक्ता चिन्तित बनेका हुन् । सरकारले तोकेको मुल्यमा उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउनुपर्ने भन्दै ग्यास कम्पनी र पसलेको विवादले उपभोक्ता ठगिन नहुने उपभोक्ताको भनाई छ ।
सिद्धार्थ, बुटवल र आरतीलगायतका ग्यास कम्पनीले पाल्पाका ग्यास बिक्रेतालाई ढुवानी खर्च दिएको प्रतिक्रिया दिएको छ । बुटवल ग्यास कम्पनीका म्यानेजर दिपक पोखरेलले कम्पनीकै गाडीमा मागे जति ग्यास पाल्पा पठाएको बताउनुभयो । ‘विगतदेखि कम्पनीकै खर्चमा ग्यास पठाइएको छ । कहिलेकाहीँ बिक्रेताको गाडी पनि आएका छन् ।’ पाल्पामा बिक्री हुँदै आएको त्रिशुल, शक्ति र स्वस्तिक ग्यास कम्पनीले ढुवानी खर्च दिन आनाकानी गरिरहेको ग्यास बिक्रेताको भनाई छ । त्रिसुल ग्यास कम्पनी बुटवलका प्रतिनिधि संजय शर्माले ढुवानी नगरिएको स्वीकार गर्दै ढुवानी खर्च दिने पहल भइरहेको बताउनुभयो ।
ग्यास डिलर्स एशोसिएसन पाल्पाका अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर बज्राचार्यले कम्पनीले दिएको ढुवानी खर्च कम हुने र भनेको बेलामा ग्यास नपठाएकाले आफूहरूले नै ढुवानी गरेर ग्यास आयात गरेको बताउनुभयो । पाल्पामा मासिक ८ देखि १० हजार सिलिण्डर खाना पकाउन एलपी ग्यासको प्रयोग गर्ने उपभोक्ता रहेका छन् ।
पाल्पाले राहदानी दस्तुरबाट रु. ३ करोड बढी राजश्व संकलन
तेजपातको पाँत र बोक्राकाे माग बढ्याे
पाल्पामा बालविवाह रोकिन सकेन
भर्ना अभियान संचालन पछि बालबालिकाहरु विद्यालय जान थाले